Andro famoahana ny ronono - mahasoa ve ny dite amin'ny ronono?
Andro famoahana ronono - fomba hanomanana ronono?
Mba hanipazana volo fanampiny iray isan'andro, tsy misy hanoanana? Ny andro famoahana ronono dia famoronana manerantany. Ny dite sy ny ronono mifangaro dia mamorona sakafo mahasalama sy mangarahara, izay mora entina mavesatra. Izy ity dia hosoka hosotroina, hanoanana tanteraka. Raha manaraka tsara ny sakafo ianao, dia misy vokatra tsara azo atao.
Miloka ny vokatra
Ny maha-tokana an'ity zava-pisotro ity dia ny fampifangaroana ny toetra mahasoa ny dite sy ny ronono, manana tsiro mahafinaritra, izay tsy afaka mirehareha amin'ny sakafom-bovoka. Na ny fanasitranana fahiny aza dia nanamarika ny fanasitranany. Mihoatra noho ny dite miaraka amin'ny ronono :
Manamafy ny vatana, manatsara ny asan'ny taova rehetra.
Manampy ny fakana ronono matavy.
Mamerina ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal.
Misy fiantraikany amin'ny kolera sy ny dièra.
Manitsy ny asan'ny fo sy ny ra, ny voa.
Manalefaka ny fihenjanana.
Manala rano rano avy amin'ny vatana.
Manome vokatra tononkalo.
Andro famoahana ho an'ny milking - recipe
Ny Tea dia nofantenana araka ny tsiro sy ny preferences. Afaka mampitombo ny dite mainty miaraka amin'ny ronono ianao, fa ny sakafo amin'ny sakafo kosa dia manoro hevitra amin'ny fampiasana dite maitso. Ny milk dia tiana haka vidy matavy. Ny ronono dia tokony hotehirizina ao anaty vata fampangatsiahana na ao anaty tavoahangy. Ny fanontaniana mikasika ny fomba hanomanana ronono mandritra ny andro famoahana dia zava-dehibe, satria misy karazan-tsakafo ho an'ity zava-pisotro ity.
Recipe for milking # 1
dite - 3 tbsp. lovia kely;
ronono - 1.5 litatra;
tantely - sotro roa.
Tsy maintsy entina amin'ny vay ny ranom-boankazo, ary ampio dite.
Manaova firaisana mandritra ny 30 minitra, mandro.
Manampia tantely misy tantely 1-2.
Recipe ho an'ny ronono No. 2
dite mifidy avy amin'ny mainty (mainty, mena, mena) - 2 tsm;
rano miboiboika - 1 glas;
ronono naroboka - 1 fitaratra.
Mofo dite, amin'ny ampahany amin'ny 2 teaspoony isaky ny vera.
Mitsangàna dimy minitra.
Manolotena ronono vovo-dronono.
Ahoana no hialana amin'ny fisotroan-toaka bebe kokoa:
Afaka misotro ronono ianao, na mangatsiaka na mafana, farafahakeliny 1.5 litatra isan'andro, eo amin'ny kaopy iray isaky ny adiny 2.
Ny antsasaky litatra hafa amin'ny vatana dia mila mahazo alalana rano, satria ny ronono dia miasa ho dibera.
Aza misotro amin'ny alina.
Andro famoahana ronono sy voankazo
Raha te-handanjalanja bebe kokoa mihoatra ny 1-2 kilao isan'andro ianao, ary tena tiany ny fisotroana, dia omena torohevitra ny mpihinana sakafo hanandrana andro iray hanamaivanana poma sy ronono. Ny voankazo dia efa tafiditra ao anatin'ny sakafo, ary avela hijanona ao mandritra ny telo andro. Ny sakafo tsara indrindra:
Ho an'ny sakafo - ampahany ronono.
Ny sakafo maraina faharoa dia pòm ao anaty tsy voafetra.
Halatra isan'ora alohan'ny sakafo - servisy dite miaraka amin'ny ronono.
Sakafo ny poketrany.
Fanaovana sakafo - ronono (tsy adin'ny telo ora alohan'ny hatoriana).
Ahoana ny fomba hamelana aina mandritra ny fifadian-kanina amin'ny ronono?
Ny hanohanana ny andro iray amin'ny ronono dia ho mora kokoa, raha miomana mialoha mialoha sy voafaritra, ahoana no fomba hanaovana molokochaj mandritra ny andro fifadian-kanina. Tsara ny mandany izany ao an-trano. Ny zava-dehibe - mandamina amim-pitandremana ny fidirana amin'ny sakafo sy ny lalana avy ao. Misy fitsipika vitsivitsy:
Ny sakafo hariva alohan'ny andro fitakiana dia mila mora foana.
Afaka mamototra ronono ianao: tapak'andro iray misotro rano toy ny rano mafana.
Misotro toaka kokoa raha mangetaheta.
Raha mandoro ny aretin-koditra ianao dia afaka mampiditra voankazo ao amin'ny sakafo.
Ny sakafo maraina voalohany aorian'ny sakafo dia mora fotsiny. Hamafiso ny vokatry ny fitaratra jiro mitovitovy amin'ny kibo eo amin'ny vavony.
Milk - fanoherana
Maro amin'ireo izay nanandrana ny sakafo ho an'ny ronono, marika ny soritr'aretina toy ny fahanginana sy ny fahalemena. Manazava izany ny mpangalatra noho ny tsy fisian'ny rano mandritra ny andro fampangatsiahana ny vatana, ary azo atao ny manonitra izany amin'ny volavolan-drongony. Raha misotro rano kely ianao, dia azo ahitsy ny soritr'aretina toy izany. Nefa na ny toetra tsara amin'ny ronono dia tsy mety ho an'ny olona:
amin'ny tsy fandeferana amin'ny lactose;
amin'ny aretina ao amin'ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal;
amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny voany;
amin'ny gout na ny aretiota.
Famoahana ronono - valiny
Amin'ny ronono, afaka mamoy ny andro 1 hatramin'ny 2 kilao ianao. Indraindray ny lanjany dia latsaky ny kilograma iray, ary tsy maintsy asongadinao fa miankina amin'ny antony maromaro ny valiny:
Ohatrinona ny fluidina ao amin'ny vatana. Ny vidiny bebe kokoa, ny lanjany bebe kokoa dia mandeha amin'ny rano.
Raha misotro zava-pisotro ianao ankoatra ny fisotroana, dia mety hidina ambany kokoa ny lanjany.
Miaraka amin'ny ezaka ara-batana maivana dia ho tsara kokoa ny valiny, mety ho very 3 kilao isan'andro ianao.
Ankoatra izany, afaka mamery kilao hafa kilao ianao, raha toa ka aorian'ny famoahana ny fifindran'ny rongony, dia mihinana sakafo tsy misy kalôria.
Ny sakafo fihinana indrindra
Amin'ny tsindry mafy
Aretina ho an'ny arthrôsia
Fanafody sira tsy misy sira amin'ny alikaola Elena Malysheva
Ny fihinanana sakafo mahomby
Ahoana no nahalavoan'i Ella Sukhanova?
Fomba fizarana - fizahana
Nahoana no tsy nijanona tampoka ilay lehilahy?
Takelaka misy fefy ho an'ny trano manokana
Tonta amin'ny fehikibo
Inona no endriky ny volo volo?
Karazanà mofomamy misy fofom-boankazo
Rahoviana aho no afaka miala sasatra aorian'ny sezareana?
Amin'ny firy no anaovanao kofehy mena?
Ny mpilalao Giacomo Gianniotti dia nifandray tamin'ny sipany Nicole Gustafson
Wisteria - fambolena sy fiahiana
Arzantina - zava-misy mahaliana
Ireo modely maimaim-poana an'izao tontolo izao
Ny Queen Elizabeth II niaraka tamin'ny fianakaviany dia nitsidika ny fanokafana ny hazakazaka Ascot-2016
Fanafody ho an'ny Beetle Colorado